Ligue 1 Archives - Football Legend
အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ ဘယ်လာရင်ကို ပေါဈေးပဲဈေးနဲ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ #PSG
PSG အသင်းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ညာနောက်ခံလူ ဟက်တာဘယ်လာရင်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၅သန်း + Add-ons ပေါင် ၅ သန်းဖြင့် စတင်ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ PSG အသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့်တပတ်ကတည်းက အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် နေ့တိုင်းနီးပါး အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နေပြီး ယခုတခါမှာတော့ တရားဝင်စတင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ ရှုံးနိမ့်ပြီးကတည်းက PSG အသင်းဟာ အင်အားတောင့်တင်းအောင် ပြုလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ PSG အသင်းနည်းတူ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နှင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့ကလည်း ဘယ်လာရင်ကို ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လာရင်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ၂၀၂၃ အထိ စာချုပ်သက်တမ်းရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လာရင်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာ နည်းပြ အာတီတာအတွက်တော့ ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အာတီတာဟာ နောက်တန်းအတွက် ဂါဘရီရယ်မန်ဂါဟေးစ် နှင့် ပါဘလို မာရီ (၂) ဦးထဲကို ပေါင်...
Categories Ligue 1/Premier League	Comments: 0
ကာဗာနီ၏ နေရာတွင် အစားထိုးဖို့အတွက် ယူနိုက်တက်မှာ အဌားကစားလျက်ရှိသည့် အီဂါလိုကို ချဉ်းကပ်နေသည့် #PSG
ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးတာနဲ့ PSG အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့နေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာ မှ ယူနိုက်တက်မှာ အဌားလာရောက်ကစားလျက်ရှိသည့် တိုက်စစ်မှူး အိုဒီယွန် အီဂါလိုကို ခေါ်ယူဖို့ မျက်စိကျလျက်ရှိပါတယ်။ အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် အီဂါလိုဟာ ယူနိုက်တက်ကု ိပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်ပိုင်း ခြေစွမ်းကောင်းများ ပြသထားသလို၊ သွင်းဂိုး (၅) ဂိုးသွင်းယူပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အရ အီဂါလိုဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ဇန်နဝါရီလအထိ ကစားရဖို့ရှိနေပေမယ့် PSG အသင်းက ကြားဖြတ်ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိပါတယ်။ PSG အားကစားဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒိုက ကာဗာနီ၏နေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ပစ်မှတ်များကို စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။ ပြင်သစ်ထုတ်သတင်းစာတစ်ခုဖြစ်သည့် Foot Mercato မှ PSG အသင်းဟာ အီဂါလို၏ အေးဂျင့်အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ PSG အသင်းမှာ တိုက်စစ်မှူးကောင်းများစွာကို...
Categories Ligue 1	Comments: 0
နောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာ အသင်းရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ကြောင့်ကြခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည့် #တူချယ်
PSG အသင်းကတော့ အတ္တလန်တာအသင်းကို နောက်ဆုံးမိနစ်သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ အနိုင်ယူပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲမှာ PSG အသင်းရဲ့ မိနစ် ၆၀ လောက် အထိ ကစားပုံဟာ လုံးဝအားရစရာမရှိပဲ အတ္တလန်တာအသင်းရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ခံထားရတယ်။ အမ်ဘတ်ပီ ၊ ဒရက်စ်လာ၊ ပါရီဒက်စ်တို့ ဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း PSG အသင်းရဲ့ ကစားပုံဟာ ပြောင်းလဲသွားရသလို၊ အနိုင်ဂိုးတွေပါ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ PSG ရဲ့ အနိုင်ဂိုးများကိုတော့ ပွဲချိန် ၈၉ မိနစ်မှာ နောက်ခံလူ မာကွင်းဟို့စ် နှင့် ပွဲချိန် ၉၀+၃ မိနစ်မှာ လူစားဝင်လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ချူပိုမိုတင်းက သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ PSG နည်းပြ တူချယ်က ပွဲပြီးခါနီး မိနစ် ၂၀ လောက်အလိုမှာ အသင်းရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ပူခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်။...
©2020 Football Legend